Windows 7 ọ bụ otu KDE? | Site na Linux
Taa, m hụrụ a vidiyo akpali nnọọ mmasị ihe ndị mmadụ ZDNET nakwa na achọrọ m ịkọrọ. Nnwale ahụ bụ iji PC na-aga n'okporo ámá KDE 4 eme ka ndị mmadụ mara ya dị ka nke ọhụrụ Windows 7.
Echefula ihe ndị mmadụ kwuru na mmeghachi omume ha.
Ihe na-atọ ọchị bụ, ọ bụrụ na a gwara ndị mmadụ na ọ bụ sistemụ dị iche, dabere na Linux, ha nwere ike jụ ịnwale ya. Agbanyeghị, mgbe ha na-ekwu na ọ bụ Windows 7, ndị mmadụ hụrụ ya dịka ihe ọhụụ na ihe ọhụụ, ma enweela ihe karịrị otu iji ya.
Imirikiti ndị mmadụ na-eji GNU / Linux eme ihe oge mbụ nwere mgbagwoju anya na enweghị ike iji ya naanị n'ihi na ha maara na ọ bụ usoro ọzọ anaghị ejikwa ha kee egwu nke na-egbochi ihe mgbochi na ojiji / mmụta ha.
Maka m nke a gosipụtara ihe 2:
1) “Ahia ahia” a nwere otutu ihe gbasara etu mmadu si ahu ihe. N'ụzọ dị mwute, ọtụtụ oge nke a na-aga ruo ọnọdụ jọgburu onwe ya nke ịdaba n'ọnọdụ ebe ahịa na-adịwanye mkpa karịa ngwaahịa ahụ n'onwe ya (Apple?).
2) Dị ka Machiavelli n'onwe ya ga-asị: mgbe ịchọrọ ịgbanwe ihe nke rennet, na-edebe obere oge ochie, na ndị mmadụ amaworị na ihe ha chere na amata ... ọbụlagodi na ọ bụghị ihe pere mpe, dị ka aha . N'okwu a, sistemụ arụmọrụ dị iche iche, mana ndị mmadụ chere na ọ bụ Windows, ha chere na ha nwere ike "nwe" ya, n'ihi na ọ bụ ihe ha ma ama.
Tupu ikwubie, ọ bara uru ịkọwapụta ya. Nke a apụtaghị na Windows 7 dị ka KDE ma ọlị (kama ọ bụ ụzọ ọzọ gburugburu?), Ọ bụ naanị ụzọ nke ịhụ ka ndị mmadụ si amata na ọ B NOTGH Windows Windows na ọ bụ Linux na KDE.
N'aka nke ọzọ, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịnụ mgbe ha na-ekwu na interface ahụ dị ezigbo mma na onye ọrụ, na ọ dị mfe iji, ebe ọ bụ na ha amaghịdị na ihe ha na-ahụ abụghị Windows.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Windows 7 ọ bụ otu KDE?
na-adọrọ mmasị akwụkwọ a n'onwe ya kde bụ ezigbo desktọọpụ
Ekwensu Dr. Wolf dijo
Ọ bụ karịa doro anya na ọ bụrụ na ị gbanwee aha ha nye ndị mmadụ, ụjọ ga-ejide ha, ebe ha maara na ị "gbanwere" ihe, ọbụlagodi ka mma [m na-ekwu na o doro anya na Linux n'ozuzu ya kwụsiri ike karịa Windows] mana hey, ọ bụ okwu nke iwepu nkwenye na uche ndi mmadu. N'ime ya nke ahụ bụ ihe siri ike ma sie ike, mana echere m na site n'ịgbalịsi ike na igosipụta ma wetara "ngwaahịa" dị mma nye ndị ọzọ, na - ahapụ anyị okwu nzuzu dị ka "micro $ oft" na ụdị nzuzu ahụ . Anyị nwere ike iweta GNU / Linux na desktọọpụ nkịtị na nnukwu ahịa 🙂
Zaghachi Satanico Dr. Wolf
Otu esi amata mgbe anyị wụnye Linux